Timo cagaaran, ikhtiyaar timo oo aan la dareemin | Ragga Stylish
Maxay kula tahay timaha cagaaran? Saamayntiisa wax ku oolka ahi waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu halista badan ee timahaaga, markaa waxaad u baahan tahay dhiirranaan iyo, wixii ka sarreeya, qaab aan caadi ahayn oo casri ah oo u dhigma timahaaga. Haddii aad had iyo jeer xirto suudh, si fiican uga fikir ikhtiyaar kale.
Cagaar waa midabka garoomada kubbadda cagta, caleemaha geedaha, iyo waxyaabo yar oo aan fiicnayn oo aan loo baahnayn in la sheego. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa midabkaaga timaha haddii aad doorato. Haddii qaabkaagu yahay mid hagaagsan, timaha cagaaran ayaa ka mid ah xulashooyinka badan ee aad u haysato timahaaga. Haa runtii, sida tusaalayaasha soo socdaa muujinayaan, waa inaad u diyaar garowdaa inaadan dareemin.
1 Caan bixiyayaal leh timo cagaaran
1.1 Fikradaha casriga ee timahaaga
2 Timo cagaaran iskuulkii hore
Caan bixiyayaal leh timo cagaaran
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad timahaaga u midabeyso cagaar, waa inaad taas ogaataa Adigu ma tihid kii ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay ee dareema in loo baahan yahay in isbeddel dhab ah lagu sameeyo timahooda muranna ka taagan yahay. Mararka qaarkood waxaa loo sameeyaa in looga tago marxalad gadaal ah, kuwa kale oo loogu talagalay go'aan qurxin fudud ... waxa iska cad in muddooyinkii ugu dambeeyay dad badan oo caan ah ay isticmaaleen midab cagaaran, ka caawinta sidii looga dhigi lahaa mid casri ah dhalinyarada.
Dhamaan fanaaniinta, fannaaniinta ayaa ah kuwa inta badan lagu tuuro iskudayada waxyaabo cusub sawirkooda. Layaab ma leh in ay si sax ah u tahay heesaayaasha sida aadka ah loogu guuleystay timaha cagaaranIyo sidoo kale midabyo kale oo si siman u garaacaya, tan iyo inta badan guulaha muusikada ganacsiga - warshad ay ku jiraan tartan badan - waxay ku saleysan tahay ka horeynta iyo dejinta isbeddel.
Fikradaha casriga ee timahaaga
Fiiri maqaalka: Timo jarista casriga ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa qaabab kale oo casri ah timahaaga.
Jared Leto waa mid ka mid ah safiirada caanka ah ee timaha cagaaran. Leto waxay noo isticmaali jirtay xulashooyin qatar ah, laakiin kiiskan hadhka cagaaran ee cagaarka ah ee heesaaha iyo jilaaga ay xirnaayeen waxaa sabab u ahaa dalabaadka qoraalka ee ah 'Ismiidaaminta Kooxda', filim ficil ah oo, sidaad ogtahay, uu ku ciyaaray Kaftanka. Si kastaba ha noqotee, Leto waxaa loo arkaa inuu aad ugu raaxeysan karo muuqaalkiisa cusub noloshiisa caadiga ah, dabeecad ahaan. Timaha uu isboortiga ku ciyaaro waa maqaarka caadiga ah ee timaha gadaal loo jaro. Sideed u aragtaa natiijada?
Dhexdhexaad badan - labadaba burushka iyo hooska cagaarka - heesaha Joe Jonas ayaa muujiyay. Inta ay leegtahay ee ah in had iyo jeer timaha la siiyo midab aan dabiici ahayn, natiijada ay ku guuleysato waa mid caqli gal ah. Intaas waxaa sii dheer, isku darka muuqaalka cagaaran iyo taabashada waxay ka caawineysaa abuuritaanka dhalanteed dherer ka weyn, marka haddii aad rabto inaad bixiso aragti ah inaad dherer dherer ah ka dheer tahay, tixgeli inaad raacdo tusaalahooda. Haddii aad doorbideyso inaad iska ilaaliso cagaarka, ha ka welwelin. Xeeladani waxay sidoo kale la shaqeysaa iftiiminta midabada kale.
Qof kale oo caan ah oo shaki la’aan caan ku ah qaadista halista sawirkiisa waa Jaden Smith. Wiilka Will Smith wuxuu isku dayay isbeddelo badan oo geesinimo leh, oo ay ku jiraan midabka timaha gacanta ku jira markan. Marka ay timaado timaha jajaban, sidoo kale waxaa xusid mudan kuwa had iyo jeer xiisaha leh ee Pharrell Williams iyo Frank Ocean, oo iyaguna soo xirtay timo jajaban.
Zayn Malik waa mid ka mid ah dadka caanka ah ee chameleonic. Isbedelada muuqaalkeedu waa kuwo aan tiro lahayn oo haa, maalinteedii waxay sidoo kale isku dayday timo cagaaran. Timaha heesaha ayaa soo bandhigi kara dhiirigelin haddii aad rabto inaad ku darto cagaar goynta timaha oo aad u gaaban. Malik wuxuu ku labalaabaa gadhka saddex maalmood ah. Sida kuwii hore, tattooed iyo casriga Malik waxay cadeyneysaa timaha cagaaran inay sida ugu fiican ugu shaqeeyaan qaabka casriga ah.
Timo cagaaran iskuulkii hore
Ku xirnaanta subculture iyo qabiilooyinka magaalooyinka, timaha cagaaran kuma koobna qarniga 21aad. Qaar ka mid ah astaamaha dhalinyarada ee 90-meeyadii ayaa horeba u arkay faa'iidooyinka ay bixiso ikhtiyaarkan timaha soo jiidashada leh markay tahay inay ka soocaan kuwa kale oo ku nuuxnuuxso dabeecadooda caasiga ah markay gudbayaan. Hadda oo dhaqanka pop-ka ee '90-meeyadii' uu si aad ah u socdo, waa mid ka waqti badan sidii hore si loo eego qaabka Billie Joe Armstrong. Hogaamiyaha Maalinta Cagaaran ayaa sidoo kale maray wajiga timaha midabada leh, malaha sidoo kale cagaar.
In kasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn, 90-kii waxaa jiray fannaaniin xitaa ka dhiirran Billie Joe Armstrong. Tusaale waa Fanaanka caanka ah ee Keith Flint. Qaabkiisa gaarka ah waxaa lagu gartaa qurxiyo, daloolin iyo, wixii ka sarreeya, timo asal ah, oo qaatay midabbo kala duwan, oo ay ku jiraan cagaar.
Markaan kahadlayno timaha cagaaran ee iskuulka duugga ah, kama baaqi karno inaan xusno ciyaaryahankii hore ee NBA Dennis Rodman.. Ku xirnaanta xad-dhaafka, timaha cagaaran waa mid ka mid ah khamaarradeeda ugu caqliga badan haddii aan isbarbardhigno kuwa kale ee ay qaadatay, gaar ahaan kuwa la xiriira dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo cagaaran